Uyisebenzisa kanjani iVidiyo ukuThengisa kwiShishini lakho elincinci lokuThengisa izindlu | Martech Zone
Ngaba uyazi ukubaluleka kwentengiso yevidiyo kubukho bakho kwi-Intanethi ishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba?
Nokuba ungumthengi okanye umthengisi, ufuna i-brand ethembekileyo neyaziwayo yokutsala abathengi. Ngenxa yoko, ukhuphiswano kwintengiso yezindlu luyoyikeka kangangokuba awunakukunyusa ngokulula ishishini lakho elincinci.
Ngethamsanqa, ukuthengisa kwidijithali kubonelele ngamashishini abo bonke ubungakanani kunye nezinto ezininzi eziluncedo ukwandisa ulwazi lwabo lwentengiso. Ukuthengisa ividiyo sisicwangciso esiliqili kwintengiso yedijithali kwaye iluncedo kuwo onke amashishini, ngakumbi ukuthengiswa kwezindlu.
Ukuba ufuna ukufunda ukuthengisa ngevidiyo iingcebiso ekulula ukuzisebenzisa ukukhulisa ishishini lakho elincinci lokuthengisa izindlu nomhlaba, qhubeka ufunda eli nqaku.
Misela iinjongo zakho kwaye uyile isicwangciso ngokufanelekileyo
Okokuqala, kufuneka wazi ukuba awunakuqala ukwenza iividiyo ngaphandle kweenjongo kunye nezicwangciso. Ukuthengisa ividiyo ngumsebenzi onexabiso kunye nokufunxa ixesha kwaye kufuna isicwangciso esichanekileyo nesichanekileyo.
Ngaphambi kokuba uqalise ukuthengisa ividiyo, thatha ixesha lokumisela iinjongo zakho kunye nokwenza isicwangciso sokuzifikelela. Kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni kanye kanye ofuna ukuyiphumeza kwaye ungafikelela nini kwiziphumo zakho ezinqwenelekayo.
Nazi ezinye zeenjongo eziqhelekileyo onokuthi uziqwalasele:
Inani lokubukwa kweevidiyo zakho ngenyanga
Ukuqonda ubushushu obufanelekileyo boku, unokufuna ukuqhuba ukhuphiswano lokukhangela ukuze ufumane iziphumo zabakhuphisana nawe bezindlu.
Xa ugqiba iinjongo zakho, unokuyila isicwangciso ngokufanelekileyo. Zama ukwakha isicwangciso esomeleleyo kwaye unamathele kuso. Ewe kunjalo, njengoko usaqala, unokufuna uhlaziyo kwinqanaba eliphakathi.
Beka bucala uhlahlo-lwabiwo mali lokwenyani
Inyathelo elilandelayo kukuqikelela inani lemali olifunayo ukuze uphumeze izindlu nomhlaba wakho iqhinga lokuthengisa ividiyo.
Eli nyathelo liyimfuneko ukuqinisekisa malunga nomgangatho weevidiyo zakho. Khumbula ukuba ukwenza iividiyo ezinomtsalane kufuna izixhobo ezininzi, kwaye emva koko, kufuneka ubeke bucala uhlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo.
Awudingi ukuba uphoxeke ukuba awukwazi ukufikelela kuhlahlo-lwabiwo mali oluninzi; ungaqala ngeevidiyo ezenziwe ekhaya kunye nesoftware yokuhlela ividiyo yasimahla.
Zama ukufunda iingcebiso ze-DIY zokwenza iividiyo ukunciphisa iindleko. Ungaya kancinci kancinci kwizixhobo zepremiyamu kunye neevidiyo ezinobuchule kwishishini lakho.
Chaza uhlobo olwahlukileyo
Kuyacetyiswa kakhulu ukuba ube nesitayile esikhethekileyo kwintengiso yakho yedijithali, ngakumbi kwiividiyo zakho. Ukungaguquguquki kolu hlobo kunceda abaphulaphuli bakho bakuqonde emva kwethutyana.
Uhlobo lwakho, kubandakanya imibala, ithoni yelizwi, uhlobo lokubalisa amabali, njl., Imele uphawu lwegama lakho. Zama ukuchaza into epholileyo ukutsala umdla wabaphulaphuli bakho. Unokufumana ingxelo kubaphulaphuli bakho ukuze wenze isitayile sakho sevidiyo sisebenze.
Unokuchaza umxholo wokutya kwizithuba zakho zemidiya yoluntu. Kuthetha ukuba xa undwendwe lubona ukutya kwakho, iiposti zinomxholo ngokubanzi. Le yindlela elungileyo yokubamba ingqalelo yabaphulaphuli kutyelelo lokuqala. Umzekelo, unokubona umxholo wokutya olandelayo kwi-Instagram:
Njengoko ubona, iiposti zenza isitayile ngokubanzi kunye. Unokwenza imixholo eyahlukeneyo kwintengiso yevidiyo yakho yokuthengiswa kwezindlu.
Hlaziya iiVidiyo zakho zearhente yokuthengiswa kwezindlu
Kubonakalisiwe ukuba xa uthetha ngobuhlobo nabaphulaphuli bakho, kokukhona ufumana amaqondo aphezulu okuzibandakanya.
Oku kubaluleke ngakumbi xa kuthengwa kwaye ukuthengisa iikhondomu okanye amagumbi. Ukuba nekhaya lelinye lamava obuqu abandakanya iimvakalelo ezinomdla kunye nokuziphatha.
Ke kuya kufuneka ubandakanye ezi mvakalelo kwiividiyo zakho kwaye uxelele amabali akho ngokujonga zonke iingxaki zabaphulaphuli bakho.
Umzekelo, zama ukuvelana nabaphulaphuli malunga namaxabiso aphezulu kunye nokunyuka kwamaxabiso. Ukubeka nje, kuya kufuneka ubenakho ukwenza iividiyo zakho zokuthengisa izindlu nomhlaba ukuze iindwendwe zikholelwe ukuba ucinga njengazo.
Khetha amaQonga amaLungelo okuThengisa ngeVidiyo
Kuya kufuneka uyazi ukuba itshaneli nganye yedijithali inabaphulaphuli bayo, ke kuya kufuneka wabelane ngeevidiyo zakho kumaqonga alungele ukuthengiswa kwezindlu.
Umzekelo, i-LinkedIn yindlela ejolise ekuqeshweni kwezentlalo, kwaye uninzi lweengcali zezindlu nomhlaba zineeakhawunti kuzo. Ngenxa yoko, kulungile ukuba wabelane ngeevidiyo zakho kweli qonga.
Amaqonga amajelo asekuhlaleni aphezulu njenge-Facebook, i-Instagram, kunye ne-Twitter zibalulekile kwintengiso yevidiyo yakho. Umzekelo, i-Instagram inezinto ezininzi eziluncedo kwintengiso yevidiyo ezinje ngezithuba zokutya, amabali, iividiyo eziBukhoma, i-IGTV, kunye neeReels. Kuya kufuneka wenze okuninzi kwezi zinto ukuze ufumane ukubonwa okuphezulu.
Cwangcisa iiVidiyo zakho zoThengiso lweearhente
IiVidiyo zinoxanduva lwepesenti ebonakalayo yokugcwala kwabantu. Uninzi lwezi vidiyo zenziwe ziimpawu, ke kubalulekile ukuba uhambe phambili kwabo ukhuphisana nabo.
Abasebenzisi baphoswa sisixa esikhulu sevidiyo, kwaye ithuba lakho lokufunyanwa liphantsi kakhulu. Enye indlela yokwandisa ukubonakala kwakho kunye nokubeka iividiyo zakho emehlweni abasebenzisi abaninzi kukucwangcisa.
Iincopho zeeyure ezikwi-intanethi apho uninzi lwabantu lusebenzisa amaqonga eendaba ezentlalo ayahluka ngokweqonga nakwimizi-mveliso. Umzekelo, elona xesha lilungileyo lokuthumela kwi-Instagram lahlukile kwi-Twitter.
Ke kungangcono usebenzise izixhobo zokucwangciswa kwemidiya yoluntu ukuthumela elona xesha lilungileyo kumzi mveliso wakho kwaye ufumane amaxabiso aphezulu okuzibandakanya kwiividiyo zakho.
Nanku umzekelo wokucwangciswa kokusebenzisa Umlo wabantu:
Phakamisa Amandla oBungqina
Igama leBrand ngundoqo ekukhuthazeni amathemba okuba ngabathengi bakho. Indlela efanelekileyo yokwenza oko kukuvumela abathengi bangaphambili bathethe egameni lakho. Iingqinisiso zibalulekile kwishishini elincinci kuba zizisa ukuthembela kwaye zenza ukuba amathemba amatsha azive ekhululekile.
Ukuba abathengi bakho baba ngabanini bamakhaya abonwabileyo, kunokwenzeka ukuba bathethe kakhulu ngegama lakho. Kuya kufuneka uhlale unxibelelana nabo kwaye ukhuthaze nephulo lakho lokungqina. Zama ukubeka ubungqina babo kwiividiyo kwiphepha lasekhaya lewebhusayithi yakho ukubazisa ukuba izimvo zabo zibalulekile.
Nanku umzekelo wobungqina obuhle obuvela kwi-YouTube:
Lungiselela ubude beevidiyo zakho
Nokuba ubude beevidiyo zakho bunokuchaphazela kakhulu i-ROI yentengiso yevidiyo yakho. Ngokubanzi, abasebenzisi bezentlalo bakhetha iividiyo ezimfutshane nezithandekayo. Kungenxa yoko le nto iifitsha zevidiyo ezimfutshane ezinjengeeReels okanye iTikTok zinyuka.
Ewe ubude bevidiyo efanelekileyo buxhomekeke kumzi mveliso wakho kunye neqonga owabelana ngalo. Ukuqala, unokujonga iividiyo zemizuzu emi-2 ubungakanani bevidiyo yakho.
Unokwenza iividiyo ezinde kumaqonga anjengeYouTube kunye ne-IGTV kwaye emva koko wabelane ngeenguqulelo ezimfutshane zezo vidiyo kwamanye amaqonga. Ngale ndlela, unokukhuthaza abaphulaphuli bakho ukuba bajonge iprofayile yakho kwamanye amaqonga.
Hlaziya ukuSebenza kweVidiyo yakho
Gcina ukhumbula ukuba akukho cebo lihlala lilungile ngonaphakade. Njengeshishini elincinci lokuthengisa izindlu nomhlaba eliqalisayo ukuthengisa ividiyo, Kuya kufuneka uphinde uhlaziye isicwangciso sakho qho.
Zama ukuhlalutya ukusebenza kwakho kwaye ufumane ubuthathaka bakho kunye namandla akho. Xa uqaphela ezona vidiyo zintle nezona zisebenza kakubi, unokuzilungiselela iividiyo zakho ezizayo kwaye ufumane i-ROI ephezulu.
Nanku umzekelo wezixhobo zokuhlaziya kwi-Twitter:
Qhuba uvavanyo lwe-A / B
Nokuba ulunge kangakanani ekwenzeni iividiyo, kuya kufuneka wazi ukuba loluphi uhlobo lwevidiyo, i-caption, hashtag, kunye nezinye izinto ezininzi ezibhenela abaphulaphuli bakho. Uvavanyo lwe-A / B yindlela efanelekileyo yokuqonda indlela abasabela ngayo kubaphulaphuli bakho kwizinto ezahlukeneyo kumajelo akho eendaba ezentlalo / kwizithuba zewebhusayithi.
Umzekelo, unokutshintsha i-hashtag yakho yevidiyo ethile kwaye uthumele zombini ezi nguqulelo ukulandelela indlela abasabela ngayo kubalandeli bakho. Oku kungqineke kuyindlela elungileyo yokwandisa iiposti zakho ngokwemidla yabaphulaphuli bakho.
Ukwazisa: Martech Zone ibandakanye ikhonkco lokudibana Umlo wabantu.
tags: vavanyouphawu lophawuisihlweleiividiyo ezingqina abathengiubungqina babathengiitegi yexabisoizindlu ezithengiswayoukuthengisa izindlu nomhlabaubungqina bepropathiIvidiyo ethengisa izindlu nomhlabaUmboniso wevidiyoiividiyo zokungqinaUhlalutyo lwe-twitterInkcazo yevidiyoubude bevidiyoukuthengisa ividiyo
UTom yingcali yentengiso ekwi-Intanethi engaphezu kweminyaka emi-5 yamava kolu shishino lwedijithali. Ukwasebenzisana nezinye iimveliso ezaziwayo ukulungiselela ukugcwala kwabantu, ukwenza iijeli zentengiso, kunye nokunyusa ukuthengisa kwi-Intanethi. Ubhale inani elininzi lamanqaku malunga nentengiso yemidiya yoluntu, ukuthengisa uphawu, ukubhloga, ukubonakala kokukhangela, njl.